Aadaa wal-danda'uu bultiin hordoftoota Musliimaafi Kiristaanaarraa ijarame - BBC News Afaan Oromoo
Aadaa wal-danda'uu bultiin hordoftoota Musliimaafi Kiristaanaarraa ijarame
Musliimoonni hedduu Burkinaa Faasoo keessa jiraatan haleellaa milishoota finxaaleyyii Islaamaan waggoota dhihoo keessatti raawwataniin miidhamaniiru.
Jala bultii ayyaana Qilleerratti garee jihaadistiin namoonni 30 ol yoo ajjeeffaman hedduun isaanii dubartootadha.
Biyyattiin seenaa waldanda'u amantii biyya qabduudha. Akkasumas namootni Musliimaafi Kiristaanaarraa bultii ijaaratan lakkofsa uummata biyyattii keessaa %23 ta'an keessatti haalli kun waan baratame miti.
Gaazexeessituun Clair MacDougall maatii abbaan warraa Kiristaanaafi haati warraa Musliimaa ta'anis waliin bultii ijaarratan kan Ogaduuguu keessa jiraatan deemtee dubbisteetti.
Daa'imni ganna 5 Osiiniyaa Ottaaraa abbaashee hordofaa amantii Kaatoolikii kan ta'e Deenis Ottaarafi haadhashee hordoftuu amantii Islaamaa kan taate Afa'usaatoo Sano'utiin Burkiinaa Faasoo keessatti guddataa jirti.
Amma ayyaana Qillee kabajaa jirti. Ta'us garuu ayyaana Islaamaa Iid's ni kabajatti.
Manasaanii Magaalaa Ogaaduuguu keessatti yeroo abbaan ishee waa'ee amantii Kiristaanaa barsiisuun haati immoo amantii Islaamaa barsiiftiin.
"Yeroo ani salaataaf gara masjiidaa deemu na waliin deemti; guyyaa Dilbataa immoo abbaa waliin gara bastaakaanaa deemti," jetti haati ishee Afa'usaatoo.
Afa'usaatoon guyyatti al-shan manatti salaatti, gaafa salaata Jumaa'a immoo intalashee waliin gara masjiida deemanii salaatu.
Intallishee yeroo baay'ee salaata jalqabaa kan ta'e salaata Subihii salaatuuf haadha ishee waliin obboroo kaati.
"Amantiin Islaam amantii waldanda'uufi namoota haala isaaniitiin fudhatuudha," jetti haati.
Intalli isaanii ammatti waan barsiifata amantii Islaamaa keessaa tokko kan ta'e salaataaf dhiqachuu (Wudu'a) gochuu fi akka itti salaatan barattee jirti.
Kitaabni biraa manasaanii keessa jiru macaafa qulqulluudha.
Deenis fi Afa'usaatoo bultii ijaartanii waliin jiraachuu eega jalqabanii waggoonni jaha darbaniiru.
Isaanis waggaa itti aanu haala amantii isaanii eegeen sirna cidhaa qopheessuuf karoora qabu.
Deenis ammatti yeroodhaaf amantiisaa jijjiiruuf qophiidha. Kunis waan dhiiroonni hordoftoota amantii Kiristaanaa sagantaa Islaamummaaf jedhanii yeroodhaaf amantiisaanii jijjiiru, saganticha booda garuu garuma amantiisaanii isa duraatti deebi'u.
"Yeroo walfuudhuuf murteessine sanitti mormiin muraasni nu mudatee ture," jedha Deenis durasarratti abbaan isaa gaa'ila isaanii akka morme yaadachuun.
"Jalqabarratti baay'ee walxaxaa ture. Abban kiyyaa rakkina hin qabu ture garuu haati tiyya itti hin amanne ture," jetti Afa'usaatoo.
"Yeroo baay'ee yoo dhiirri Kiristaanaa ta'eefi intalli Musliima taatee dursarratti kan morman maatii intalaati."
Isheen ammas haadha ishee amansiisuufi gaa'ila isaanii akka eebbisaniif amansiisuuf yaalaa jirti.
Lammiileen Burkinaa Faasoo hedduun isaanii walmakoo Kiristaanaa, Musliimaafi hordoftoota amantii biroofi Kirstaanaafi Musliimaa yoo ta'an maatii gama biraa biratti yeroo baay'ee haalan simatamu.
Biyyattiin waldanda'uu amantiitiin seenaa yeroo dheeraa qabdi.
Afa'usaatoo hirriyoota Kiristaanaa ta'an heddu qabaatus guyyaa ayyaana Qillee garuu gara bataskaanaa hin deemtu. Isheenis maatiishee kan ayyaannicha kabajan waliin kabajatti.
"Ayyaanoota hunda ni kabaja: Iida, Arafaa, Qillee" jetti.
Guyyaa ayyaana Qillee bataskaanni Kaateediraal hordoftootaa amantichaatiin ni guuttama.
Poolisoonni hidhatan dallaafi seensa bastakaanaa ni eegu. Yeroo dhihoo keessatti milishoonni finxaalesitootaa Islaamaa Kiristaanotaafi Musliimotarratti haleellaa taasisuuf yaalanii turan.
Namoonni naannoo kaateediraal jiraatan manneen isaanii biqiltuu Qillee pilaastikii bituun ni bareechu.
Guyyaa ayyanaa Qillee Deenis intala isaa waliin gara bataskaanaa deemu. Achi boodaa maatiin hundi Afa'usaatoo dabalatee gara mana 'abbeerota' Deenis deemuun ayyaanicha kabaju.
"Amantii kiyyaa akka itti namoota kabajaniifi jaalatan na barsiiseera," jedha Deenis. "Waaqa qofa kan nama madaalu."
Maatiin Aayiiris yeroo isheen guddatte ofiisheetii amantii barbaadde akka hordoftu barbaadu. Yeroodhaaf garuu bataskaanaas masjiidaa ni deemti.
Haatifi abbaan ishee murtee isheen murteessite kamuu ni jaalatuuf.
"Jaalalli amantii kamuu ol, jedhe Deenis.
Viidiyoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa: Loltuu ABO hanga barsiisaa amantii-Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa